Obere Business Social eji Aghọ Aghụghọ Ule Akwụkwọ Martech Zone
Obere Business Social eji Aghọ Aghụghọ Ule Mpempe akwụkwọ
Tuesday, January 24, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
M hụrụ n'anya m peeps n'elu na Nkebi nke ise, ma echere m na ọ ga-abụrịrị na ha etinyela ọtụtụ ihe na-elegharị anya nke Diggnation. Ugwu N'ezie? Site n'echiche ọ bụla, DiggIli e me Dugg na StumbleUpon bụ onye na-akụ okooko osisi. N’oge na-adịghị anya? Ndo ndi ozo… mgbe ndi na ege nti puru, ngwa nke ndi mmadu nwuru. Ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ma chere… n'ezie… anyị Agbaghara LinkedIn, oke? Azụmaahịa Google? Ị na-egwusa m egwu? Ikekwe ọ bụ ihe siri ike karịa biya.
Alright… anyị emeela ihe ọchị nke onye njikwa ọrụ na infographic a maka Flowtown. Ka anyị laghachite n'okporo ụzọ… akwụkwọ mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta a na-enye ntọala dị ukwuu maka obere azụmaahịa iji kpebie otu esi akachasị leverage ọ bụla metụtara mmekọrịta (edepụtara). Ọ bụrụ na ị bụ obere azụmaahịa - biko echefula LinkedIn, StumbleUpon na ebe Google, dịkwa!
Tags: akwụkwọ aghụghọndepụta ndepụtaigwuFacebookLinkedInelekọta mmadụ mediatumblrTwitter
Kwado edemede na Mbipụta Njikọ na WordPress
Mar 21, 2013 na 12: 39 PM
I kpam kpam na-ekweta na LinkedIn omission… Fọrọ nke nta ka glaring bụ Instagram na Pinterest omissions. Ha abuo bu ihe eji ama ahia.
Krishna Ochechukwu (@nkechi_nweke)
Nov 4, 2016 na 10:03 AM
Oge maka mmelite!